| ndaeyo ebe a, ka anyị nweta textiles dị mma! - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Fewbọchị ole na ole gara aga, a "mmetụta dị mma" mkpuchi si na Uniqlo dọtara uche ndị mmadụ, na-eme ka obodo dum kwụ n'ahịrị iji zụta ya. Ọ bụ eziokwu na masks abụrụla ihe mmadụ kwesịrị iji bụrụ ejiji ga - eme ka ndị mmadụ pụọ n'ọnọdụ nsogbu. Otú ọ dị, chere ihu ogologo sultry mmetụta nke oge ọkọchị, ndị mmadụ na-amalite ichigharị anya ha ka ha wee dị mma iji mara ihe dị mma na nkasi obi. Yabụ, ihe dị mma mmetụta textile mgbe niile, ụdị ahụlaụ ahụ mara mma nke mmadụ nwere mmasị ugbu a karịa ihe ọ ga-eme ọzọ?
Uwe ndị na-arụ ọrụ nke nwere mmetụta dị jụụ na-agbaso ụzọ ndị pụrụ iche (dị ka mgbanwe nke akụrụngwa akụrụngwa ma ọ bụ nhazi mmecha, wdg), nke mere na akwa ahụ nwere ọrụ nke ịgbasa ahụ ọkụ ngwa ngwa, osooso osooso ma mee ka obi juo gi, ma nwee ike idowe akwa ahụ ka ọ dị mma ruo ogologo oge. A na-ejikarị uwe eji eme ka ihe dị mma maka uwe na akwa.
Jụụ mmetụta eriri
Igwe nju oyi na-eme ihe dịkarịsịrị mma na polyester, eriri polyamide na-agbaze agbaze ma ọ bụ viscidity site na ịgbakwunye ụfọdụ mineral nanometer, ihe eji eme ihe ndia ka ezigbo okpukpo oku di elu iji belata okpomoku nke aru, ngwaahịa ndị kachasị mkpa nwere eriri mica, jed eriri, osikapa ọka eriri.
Ọmụmaatụ, Chemical Fiber Co., Ltd. Jiri US mmịpụta na nanotechnology iji bulie nhazi nke ihe ndị sitere n'okike dị ka sịga, shei ntụ ntụ, mica ntụ ntụ n'ime nanoscale ahụ, nke a na-agbakwunye na ntanetị na nzere na-agbaze iji mepụta Kusma nanoscale fiber jụụ. Eriri ahụ nwere mmetụta dị jụụ na-aga n'ihu. Mgbe akpachara akpụkpọ ahụ kpọtụrụ, ngwaahịa ga-emepụta a 1 ~ 2 ℃ oge obi ruru ala, na ọdịiche nke okpomọkụ nke 5 ~ 6 ℃ a ga - eme ka ọ bụrụ ogologo oge ekpughepụrụ anyanwụ.
Na itinye n'ọrụ, Na mmekota na DuPont, Launchedlọ ọrụ ahụ butere 2020 Ngwunye teknụzụ A-Chill TOUCH COOL, nke bụkwa ihe ngosi izizi nke "SORONA®+EGO" Nka teknụzụ COOL n’ime ụwa. Kpụrụ dị jụụ bụ ịgbakwunye otu akụkụ nke ntụ ntụ nke sedimenti jade na SORONA® eriri (300 ~ 500 nm) ịbawanye ọrụ dị jụụ n'okpuru ụkpụrụ nke ịnọgide na-enwe ọrụ nkwado dị mma nke eriri, nke mere na uwe n’oge ọkọchị nwere mmetụ ọzọ dị mma. N'otu oge ahụ, jikọtara ya na usoro ihe eji emechi heteromorphic nke eriri ahụ, absornweta mmiri na ngwa ngwa ihicha ngwa ngwa ka mma.
Jụụ obi mma idozi
N'akụkụ aka nke ọzọ, mgbe inyeaka nwere xylitol, a na-etinye mmanụ pepemint na ihe ndị ọzọ na-ewe iwe ma na-enweta mmiri na mmiri, akwa a ga-enwe echiche ịre oyi, mana nju oyi adighi adi ogologo ma gha agbadata site na mmụba nke oge ịsacha. Rolf nke Rudolf® -CMB Igwe -- Onye na-ahụ maka Menthol Cool Comfort na-emechi emezi na-eji ohere akpọrọ eke jụrụ agwa iji nye akwa ahụ ka ọ dị mma. N'otu oge ahụ, ihe ndị mejupụtara polymer na-eme ka mmiri ghara ịdị na-akwalite mmiri na-aga n'ihu, mezie elu igwe na iru mmiri, si otú a na-akpụzi mmetụta dị mma maka ogologo oge.
Dị ka ụdị nke latent okpukpo nchekwa ihe nchekwa, ihe ndị na - agbanwe agbanwe nwere ike mepụta nchekwa na ịhapụ ya site n'ịgbanwe usoro ihe a na - agbado, nke dị mma maka akwa ajị anụ dị mma. Ọmụmaatụ, Nsa nke NASA® teknụzụ eji USES ihe mgbanwe ihe (PCM) nke ahụ banye, ụlọ ahịa, na wepu okpomoku maka ezigbo nkasi obi nke okpomoku. Ejiri akwa na outlast® akwara na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ ma na-edozi okpomoku na iru mmiri n’elu ahụ.
Mpụga® Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji teknụzụ ejirila teknụzụ wepụta ngwaahịa ndị nwere ọgụgụ isi na-ahazi mmiri ọkụ. Ọmụmaatụ, Bielefin 'outlast ikuku ditiongba oyi akwa usoro eji US fiber na-agwakọta teknụzụ na-agwakọta Outlast ozugbo.® nhazi oge na - agbanwe eriri ọkụ n'ime akwa maka nhazi oke okpomọkụ.
Na mgbakwunye, na mmepe nke sayensị na teknụzụ, a na-amụzi nanomaterials ndị ọhụrụ maka thermoregulation textiles. Ndị na-eme nchọpụta na Mahadum Monash ewepụtala nanofilm nke ejiri cesium-tungsten oxide doped (CsxWO3) nwere ike ji mee ihe dị ka ihe mkpuchi maka akwa, n'ụzọ dị irè igbochi nso-infrared radieshon. Mgbe akwa nhicha nano kpuchiri ìhè anyanwụ, ọ jụrụ site 4.5 Celsius Celsius na-echebe megide ọtụtụ UV ụzarị, ka ndị nnyocha ahụ kwuru. Ọzọkwa, mkpuchi ahụ agaghị emetụta ndụ akwa na agba, ya na ezi njigide njigide na asa nguzogide.
The ihe onwunwe, nke nwere mkpuchi ka mma karịa aramid nkịtị, na-atụ anya na a ga-eji na ọgbọ na-abịanụ nke ohere suut
Super na-abụghị ileghara bionic ịkpụ akpụkpọ ụkwụ